प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालीलाई ऋ'णमा डु'बाउने खतिवडामा के छ त्यस्तो अचम्मको कुरा जुन कुलमानमा छैन ? - Prateek Nepal
प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालीलाई ऋ’णमा डु’बाउने खतिवडामा के छ त्यस्तो अचम्मको कुरा जुन कुलमानमा छैन ?
October 2, 2020 October 2, 2020 Ramash kunwar
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालको मध्यविन्दूमा छन् । यस्तो लाग्दैछ कि उनी आफ्नो दोस्रो कार्यकाललाई बिर्सन लायक बनाउन कुनै कसर छाड्नेवाला छैनन् ।कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सबैभन्दा आधारभूत मान्यता हो, जनमतको कदर । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार जनमतको अनादर र अपमान गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणबाट विदा गर्ने, वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूतमा नियुक्त गर्ने सरकारका पछिल्ला तीन कदम जनभावना विपरीत छन् ।वामदेवको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको चाहनाभन्दा पार्टीको समीकरण वा द’बाव निर्णायक थियो भन्ने मानौं । तर, कुलमान र डा. खतिवडाको सन्दर्भमा भएका निर्णयहरुका लागि सिधै उनी जवाफदेही छन् ।
उनले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । कुलमान के कारणले प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउन वा अर्को कुनै पदका निम्ति योग्य भएनन्, र खतिवडा के–कति कारणले यत्रतत्र अपरिहार्य भए भन्ने प्रश्नलाई उनले कार्पेटमुनि कोच्न सक्दैनन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले करिब १५ दिन अगाडि पदबाट अवकाश पाए । उनलाई प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्तिको पक्षमा बहुसंख्यक मजनता थिए । कुलमानलाई अर्को कुनै संस्थाको नेतृत्व दिनृुपर्ने जनमत पनि उत्तिकै बलियो थियो । तर, जनमतलाई कुल्चिँदै सरकारले उनलाई प्राधिकरणबाट विदा गर्यो । अर्को नयाँ जिम्मेवारी दिन पनि चाहिरहेको छैन ।
कार्यसम्पादनको हिसाबले खतिवडाको तुलनामा कुलमान निकै अगाडि छन् । नेपालमा लोडसेडिङ हटाउने र घाटामा चुलुम्म डुबेको एउटा संस्थानलाई अर्बाैको नाफामा पुर्याएर एउटा कर्मठ राष्ट्रसेवकका रुपमा उनले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् । त्यही भएर उनी जनताको ढुकढुकी बन्न सफल भएका हुन् । उनलाई अर्को कार्यकाल दोहो¥याएको भए वा अर्को जिम्मेवारी दिएको भए सरकारको लोकप्रियता बढ्ने थियो । जनमतको कदर गरेको ठहरिने थियो । प्रधानमन्त्रीको छाती अलि फराकिलो देखिने थियो । तर, यति सानो कुरामा पनि उनी चुकिरहेका छन् ।
दुईपटक अपदस्थ हुन लागेर पनि जोगिएका प्रधानमन्त्री ओलीसामु अन्तिम अवसर छ । समय बाँकी छ चानचुन अढाई वर्ष । अघिल्ला अढाई वर्ष समग्रमा सम्झनलायक भएनन् । अब बाँकी अवधि पनि यसैगरी गुजारे भने प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक जीवनको नमिठो समापन हुनेछ ।
खतिवडालाई आराम र कुलमानलाई जिम्मेवारी दिएर उनले आफूलाई सच्याउने क्रमको श्रीगणेश गरुन् ।
शुक्रबार यसरी गर्नुस् महाकालीको पूजा , तुरुन्त लाभ मिल्नेछ !
राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म खतिवडालाई पदैपदको बहार !
दशैंको मुखमा ल’कडाउनलाई लिएर देशैभरिका नागरिकहरुलाई नेपाल सरकारले दियो खुसिको खबर !
October 16, 2020 October 16, 2020 Ramash kunwar
January 15, 2021 January 15, 2021 Ramash kunwar
sad news…नायव सुव्वाको दु’र्घटना मा गयो ज्या’न
December 24, 2020 Ramash kunwar